စံဝင်းချို Daily Hope You’re Not Alone
“ထိုကြောင့်၊ ဤမျှလောက်များစွာသော သက်သေအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ခပ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်း၊ နှောက်ရှက်တတ်သော ဒုစရိုက်ကို၎င်း ပယ်ရှား၍၊ ငါတို့မျက်မှောက်၌ ထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ ရောက်ခြင်းငှါ၊ အားမလျော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့။” (ဟေဗြဲ ၁၂း၁)
သင်အရှုံးပေးရမည့်အခြေအနေမျိုးတွင်သင်ဘာလုပ်မလဲ? လူတိုင်းသည်ဤအခြေအနေမျိုးတွင် တစ်ခုခုကို အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းကြရသည်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စ ဖြစ်နိုင်စရာ၊ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာ၊ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊- ထိုကြောင့်ဆက်လက်သွားနိုင်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိကိုသိချင်သည်၊အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်သူတို့သည် အလင်းကို ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်မတွေ့ရကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်သည်ထိုအခြေအနေမျိုးယနေ့တွေ့ကြုံရလျှင်၊ ကျွန်တော် ဟေဗြဲ ၁၂ နှင့် သင်ကို အင်အားကြီးမားသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဆက်လက်သွားနိုင်ရန် မျှဝေလိုပါသည်။
ဟေဗြဲ ၁၁ သည် ယုံကြည်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်၊ ပြောင်မြောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းပြောပြသည်- အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ်၊ နှင့် အခြားသူအများ။သူတို့၏ပုံပြင်များသည်၊ သူတို့၏အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနှင့် အထောက်အထားများဖြစ်သည်။ နောက် အခန်းကဏ္ဍ၏ပထမကျမ်းပိုဒ်၏ အစမှစ၍ဆုံချက်အနေနဲ့ဖြင့်ယူလိုသည်၊ ဟေဗြဲ ၁၂း၁ ကပြောသည်မှာ “ထိုကြောင့်၊ ဤမျှလောက်များစွာသော သက်သေအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ခပ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်း၊ နှောက်ရှက်တတ်သော ဒုစရိုက်ကို၎င်း ပယ်ရှား၍၊ ငါတို့မျက်မှောက်၌ ထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ ရောက်ခြင်းငှါ၊ အားမလျော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့။”
ပေါလုကပြောနေတာက သင်သည်အရှုံးမပေးလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှကြည့်နေပြီး၊သင် အားတက်စေရန် သြဘာပေးနေသောကြောင့်၊ ဤအရာသည်အာပေးသည့်သတင်းဖြစ်သည်။
သင်မှာ ပရိသတ်ရှိသည်။ သင်ဘာဘဲလုပ်လုပ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ၊ သင်လုပ်ခဲ့သည်များသည်၊ ကောင်းကင်ကို ၀ှက်သည်မရှိပါ၊ ဘုရားသခင်အာလုံးကိုမြင်ရသည်၊ ယောဘပြောသလို “ဘုရားသခင်သည် ငါသွားရာလမ်းတို့ကို မြင်တော်မူသည် မဟုတ်လော။ ငါ့ခြေရာရှိသမျှတို့ကို ရေတွက်တော်မူသည် မဟုတ်လော။” (ယောဘ ၃၁း၎) သခင်ယေရှုကပြောသည်မှာ “သင်တို့ဆံပင်သည်လည်း အကုန်အစင် ရေတွက်လျက်ရှိ၏။ ထိုကြောင့် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့သည် စာငှက်အများတို့ထက်သာ၍ မြတ်ကြ၏။” (လု ၁၂း၇) ဘုရားသခင်သည်သင် အသက်တာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိသည်။ သင်၏ထွက်သက်ဝင်သက်ယူခြင်းကိုစောင့်ကြည့်သည်။ သင်၏အသက်တာ၌လျှိုဝှက်ခြင်းမရှိပါ။
ဤသို့ကြည့်မြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် တစ်ဦးထဲမဟုတ်ပါ၊ အာဗြံဟံ၊ ယာကုပ်။ မောရှေ၊ နှင့်အခြား သူတော်စင်များ ပါဝင်ကြသည်။
ဤသည်မှာ အဘယ်ကဲ့သို့အားတက်စေသနည်း? သင်စတင်၍စိတ်ပျက်အောင်လုပ်လျှင်၊ သတိရပါ၊ လူအချို့ဒီထက်ဆိုးသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေကြတာတွေ့ရတယ်၊ သင်သည်သည်းညည်းခံနိုင်သည်။
သင်သည်အလျှော့ပေးရန်ခံစားမိလျှင်၊ လူတွေသင့်ကိုကြည့်နေသည်နှင့်အာပေးတိုက်တွန်းခြင်း၊သူတို့၏ အသက်တာရှိယုံကြည်ခြင်းပုံပြင်များကိုသတိရပါ။
Tuesday June 28, 2011 12:00AM Posted by Jon Walker